Indlu encinci ecaleni kwehlathi
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguValérie
Indlu encinci epholileyo, ebuyiselwe ngokupheleleyo kunye nazo zonke iimod cons, ukuphosa ilitye ukusuka ehlathini kunye nenqaba yelali embindini welali.
Kumgangatho ophantsi, igumbi elinye elinekhitshi elinomatshini wokuhlamba izitya, iwasha-somisi, igumbi lokuhlala elivulekileyo elinebhedi yesofa enesitulo esi-1 / igumbi lokutyela elinomgangatho weparquet, ibhedi yesofa kunye netafile. I-TV e-1, ibhokisi ye-intanethi enye
Kumgangatho wokuqala igumbi lokulala elinebhedi eyi-140 kunye nendawo eguqukayo ye-1, yonke indawo yokulala intsha, i-TV eyi-1, ibhedi enokwenzeka ngesicelo, kunye nomgangatho weparquet kunye negumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese.
I-cottage yethu itholakala kwidolophana enenqaba enhle kunye nehlathi elifikelelekayo ngeenyawo zokuhamba, ukuhamba ezininzi okanye ukuhamba ngebhayisikili. Ngaphantsi kwe-3 km kude, iziko lokuzonwabisa elinequla lokuqubha langaphandle, izikhephe ezinyovwayo, iipentaglisses ... kunye nedama lokuqubha langaphakathi elinezilayidi, ukuba nokwenzeka kokuqeshwa kwephenyane echibini okanye emlanjeni. Isekethe yebhayisekile yeekhilomitha ezingama-43 idlula kwilali yethu. Thina imizuzu-10 ukusuka Châteaudun, nqaba, nemiqolomba, imbali yendalo imyuziyam, umthendeleko aphakathi ezinkulu "mboniso yoboya" kwi-veki woku-1 ka-Julayi ngonyaka ngamnye -. 50km ukusuka kwiziko yimbali ye Chartres kunye nendlu yayo edumileyo, ukhanyiso yesixeko ezikhumbuzo zayo ukususela ku-Apreli ukuya kuSeptemba (URL OBUFIHLIWEYO) ye zakhe ezinde ye-Loire: Chambord, Cheverny, Chenonceau, Chaumont Sur Loire, le Clos Luce, (email ifihliwe) uLeonard de Vinci e Amboise kunye nabanye abaninzi .- iyure e-1 ukusuka Blois nge enqabeni yawo nendlu yayo zemilingo - iyure-1 nemizuzu engama-30 ukusuka Beauval zoo e St Aignan (URL OBUFIHLIWEYO) ukusuka Papéa-isixeko kunye Tépacap le Mans kusonwabisa park - iyure-1 nemizuzu engama-30 ukusuka eParis.